श्रावण ८, २०७८ मध्य नेपाल संवाददाता
सडक राम्रो भयो भने धेरै कुराहरु सहज हुन सक्छ । आवतजावत सहज भई समयको बचत, स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका बस्तु बजार सम्म पु¥याउन सहज वा बजारबाट समानहरु ओसार पसार गर्न सहज हुन्छ भनौ सडकले हाम्रो जिवनलाई नै सहज बनाई दिन्छ । सडक राम्रो भई दियो भने हाम्रो यात्रालाई आरामदायी बनाउने मात्र नभई समयको पनि बचत हुन्छ । तर सडक निर्माण गर्न सहज छैन । सडक नभएका कारण समयमा उपचार नपाएर कति जनाले ज्यान गुमाउन परिरहेको छ ।
सडक राम्रो भईदियो भने स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, आगलागी जस्ता घटनामा पनि तुरुन्तै दमकल आउन सक्छ । आफनो क्षेत्रको सडक निर्मााणका लागि बजेट विनियोजना गराउन ठुलै पावर चाहिन्छ । बजेट आईहाले पनि ठेक्कादारका कारण समयमा सडक निर्माण हुदैन । सडक निर्माणको समयमा त झनै सास्ती खेप्नु पर्छ । जनतालाई हिलो र धुलो नखुवाई सडक निर्माण नै हुदैन । यति कष्ट सहेर निर्माण भएका सडक दुरुपयोग गर्न हामी पछाडी पर्दैनौ आखिर किन होला ? अरु ठाउमा गयौ भने सफा, चौडा र चिटिक्क परेको सडक खोज्छौ तर आफनै अगाडीको सडक विभिन्न बहानामा दुरुपयोग गरिरहेका हुन्छौ ।
आखिर सडकको दुरुपयोग गर्न हामी किन अगाडी ? सडक भएन भने सास्ती खेप्छौ तर त्यही सडक निर्माण भए पछि त्यसको संरक्षण गर्न हाम्रो ध्यान किन जादैन ? बाटौ मै समान राखेर बेच्ने, गाडी पार्किग गर्ने, निर्माण सामाग्री राखेर बाटो अवरुद्ध गर्ने, गाडी मर्मत गर्ने ग्यारेजहरु सडकमै गाडी मर्मत गर्ने, पैदल यात्रु हिडनका लागि बनाईएको बाटोमा आफनो पसलको स्टेन बोर्ड राख्ने, बाहिर समान झुन्डयाएर राख्ने, बाटोमै गाडी राखेर सामान लोड गर्ने जस्ता काम हामी सडकमै गरिरहेका हुन्छौ जसले गर्दा दुर्घटा हुनुको साथै सडकको आयुमा समेत कमी आउछ । वीरगंज लगायत प्रदेश २ कै धेरै सडकहरु राम्रा छैनन् ।
सडककै कारण हाम्रा यात्राहरु क्ठिन भईरहेका छन । सकडकै कारण हामी कति सास्ती भोगीरहेका छौ । कतिपय सडकहरु बनीरहेका छन तर कहिले बन्छन त्यसको ठेगान छैन । कतिपय पुलहरु विगत १२ बर्ष देखि बनिरहेका छन तर कहिले सम्म पुरा हुन्छ त्यसको जवाफ दिने निकाय मौन छ । एकातिर सकड निर्मााणमै समस्या छ भने अर्काेतिर सडकको दुरुपयोगमा पनि हामी अगाडी छौ । वीरगंजको बाईपास तिर सडकहरु बनेका छन तर त्यसको दुरुपयोग त्यतीकै भईरहेको छ , खोई त्यतातिर हाम्रो ध्यान गएको ? सडक दुरुपयोग रोक्न स्थानीयको ध्यान किन जादैन ?
सडक सवैको साझा सम्पति हो त्यसैले यसको संरक्षण हामी सवैले गर्नु पर्छ । सडक निर्माण गर्न यहाँ सहज छैन, बिना पावरको सडक निर्माण गर्न सकिदैन त्यसैले हाम्रा घर, समुदाय अगाडी बनेका सडकको संरण गर्न हामी अगाडी बढनै पर्छ । स्थानीय स्तरमा पनि धेरै स साना सडकहरु निर्माण भएका छन । टोल टोलमा सडकहरु ढलान भएका छन भने ठुला शहरहरुमा पनि शहरी विकासको नाममा सडकहरु बनेका छन बनेका सठडहरुको संरक्षण र सदुपयोगमा स्थानीयको भुमिका महत्वपुर्ण हुन्छ ।
टोल टोलमा समिति बनाएर हुन्छ की भएका समितिहरुलाई सकृय बनाएर हुन्छ बनेको संरचना संरक्षण गर्न जरुरी छ । होईन भने सडक बनाउनेले बनाउदै गर्छ दुरुपयोग गर्नेले दुरुपयोग गर्दै गर्छ । स्थानीय स्तरमा बनेका सडकहरुको दुरुपयोगको बारेमा स्थानीय सरकारलाई थाहा नभएको पक्कै छैन हाला त्यसैले यस तर्फ स्थानीय सरकारको पनि ध्यान जान जरुरी छ । दुरुपयोग भएका सडकलाई खाली गराउनका लागि समय समयमा अभियान चलाउन जरुरी छ ।
शुक्रवार, श्रावण ८, २०७८, ०२:०७:००